TOGETHER WITH YOU(Steembounty) - သင် စေညွှန်းရာ သင်နှင့် အတူ - Week #15 (@aggamun) — Steemit
TOGETHER WITH YOU(Steembounty) - သင် စေညွှန်းရာ သင်နှင့် အတူ - Week #15 (@aggamun)
aggamun (57) in community • last month
ကျွန်တော် ဒီ idea ကို @pifc က ရယူပါသည်။ သူ့ကို credit အပြည့် ပေးပါတယ် ခင်ဗျ။ အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့ တိုင်း ဒီလို post မျိုး ဖန်တီးဖို့ အစီအစဉ် လုပ်ထားပါတယ် ခင်ဗျ။
အရင်ဆုံး steembounty အကြောင်း သိသလောက် ပြောပါရစေ။
#Steembounty ဆိုတာ စတီးမစ် အသုံးပြုသူများကို STEEM များကို ခွဲဝေ ပေးတယ် စနစ် တစ်ခုပါ။ အဲသလို ဖြစ်ဖို့ bounty ပေးထားတဲ့ post အောက်မှာ comment ပေးထားဖို့တော့ လိုပါတယ်။ bounty ကလည်း စိတ်ကြိုက် ပေးလို့ရပါတယ်။ 1 STEEM2STEEM5STEEM စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ။ အဲ့ bounty ကို post ရဲ့ comment ပေးသူများကို အချိုးကျ ခွဲပေးတာပါ။ comment မှာ upvote များများ ရတဲ့ သူက % အလိုက် STEEM ပိုရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် bounty ပေးသူ post ပိုင်ရှင်ရဲ့ upvote ကို ရသူ က ပို အလေးသာပါတယ်။ အဲဒါ အားလုံး ကို @steem-bounty က post တင်ပြီး ၇ ရက်မြောက်နေ့မှာ auto လုပ် ပေးပါတယ်။ ဒါကျွန်တော် သိသမျှ အကုန်ပါပဲ။ အဲဒါတွေ အားလုံးကို bro @mmunited ပြောပြလို့သိတာပါ။
ဆိုလိုတာကတော့ #Steemit မှာ ရှိတဲ့ မိမိပိုင်ဆိုင်ထားသော STEEM တွေကို မိမိ community ထံ ခွဲပေးချင်တဲ့ အခါ ဒီစနစ်လေး က မဆိုးလှပါဘူးဗျ။ ပျော်စရာ လည်း ကောင်းသလို post မှာ comment တွေလည်းရပေါ့။ ကျွန်တော် လည်း အခု ပျော်ချင်လို့ comment ရချင်လို့ bounty ပေးပါတော့မယ်။ ကျွန်တော့ ဆီက bounty ရဖို့
post ရေးစရာ မလို။ ( No post)
resteem လုပ်စရာ မလို။ (No resteem)
upvote ပေးစရာ မလို။ (No upvote)
follow လုပ်စရာ မလို။ (No follow)
ပြီးပြည့်စုံ တဲ့ comment တစ်ခု သာ လိုအပ်ပါတယ် ခင်ဗျ။ (Only one comment)
ဘယ်လို comment မျိုးပါလိမ့်။
ဟုတ် comment တစ်ခုပါပဲ။ Only one comment. ဒါပေမယ့် အချက် သုံးချက် တော့ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကို လိုက်နာမှ ကျွန်တော်က vote ပေးလို့ ရမှာပါ။
ယနေ့ သင် steemit မှာ သဘော အကျဆုံး post တစ်ခုရဲ့ (မိမိ ကိုယ်ပိုင် post မှလွဲ၍ အခြား မည်သည့်) link ကို comment ပေးပါ။ ဘာကြောင့် တခြားသူတွေပါ ဖတ်သင့်သလဲ ဆိုတာကို တိုနိုင်သမျှ အတိုချုပ် ရေးပေးပါ။ ပြီးတော့ သင် ဖတ်စေချင်တဲ့ သူကို tag တွဲ ( သို့ ) mention ခေါ်ခဲ့ပါ။
အထူး အထူး တားမြစ်ချက်
ကျွန်တော် တောင်းဆိုသော comment မှ လွဲ၍ အခြား အခြား မည်သည့် comment မှ မပေးခဲ့ပါနှင့်။
အခြား မေတ္တာ ရပ်ခံချက်
ဒါကတော့ မိတ်ဆွေ တို့ရဲ့ သဘောကျ လုပ်ချင်မှ လုပ်ပါ။ အကယ်၍ bounty လေးကို စိတ်မဝင်စားဘူး သို့မဟုတ် comment မပေးချင်ဘူး ဆိုခဲ့ရင်တောင် အခြား comment ပေးသူများ ရဲ့ post link ကို ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုပြီး သဘောကျပါက သူ့ comment ကို upvote လေး ပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်။ Please! Request only! 😍 😍
အားလုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာ ကြပါစေ ခင်ဗျားးးး ……
I got this idea from @pifc. I fully credit to him for that. I haveaplan to create like this post every Monday per week.
You don't need to upvote this post, follow me and resteem this post.
Only one valid comment.
If you give unrelated comment, I give you downvote and register in blacklist of bounty.
Leaveacomment one post link ( not your own post) you want to share with us.
In your comment, write something why I should read it.
Tag someone you want to read this post.
Please support others by visiting their post and leaveareply to their comment. If you like, please upvote their comment as you can. I appreciate you for that.
Give my love to you all ,Steemians. 😍 😍 😍
written by : @aggamun
MSU NO - 022
community myanmar steem-bounty kryptonia steembounty
last month by aggamun (57)
nayhlaingsoe (54) · last month
https://steemit.com/esteem/@ayethatmon/poem-9521795df0185 ကဗျာဆရာတွေလည်း တော်တော်ရေးတက်လာပြီ @ayethatmon, @mmunited
aggamun (57) · last month
ဟုတ် ဘဒိုရေ ။ သူက တကယ် ကဗျာ ဆရာမ ပါ။ ကျနော်က ကဗျာ့ဉာဏ် မရှိတော့ သူ့ကဗျာတွေ ဖတ်ရတာ ပိုးသာကုန် မောင်ပုံ စောင်းမတတ် ဆိုသလိုပါပဲ။
ဟုတ် ဘဒိုရေ ကျနော်က ကဗျာ့ဉာဏ် မရှိတော့ သူ့ကဗျာတွေ ဖတ်ရတာ ပိုးသာကုန် မောင်ပုံ စောင်းမတတ် ဆိုသလိုပါပဲ။
steem-bounty (67) · last month
@aggamun has set 1.000 STEEM bounty on this post!
@nayhlaingsoe has earned 0.9 STEEM. 0.882 STEEM from the creator of the bounty and 0.018 STEEM from the community!